မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ငွေကျပ် ၄၁ ဘီလီယံကျော် သုံးစွဲ၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကမ်းပြိုကာကွယ်? - Yangon Media Group
မန္တလေး မတ် ၆
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေးရှိ ကျေးရွာများ ကမ်းပြိုမှု ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ငွေကျပ် ၄၁ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ သုံးစွဲ၍ နေရာ ၁၉ ခုတွင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ဧပြီလတွင် လုပ်ငန်းများပြီးစီး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဘတ်ဂျက်ပိတ်တဲ့ မတ်လအပြီးဆို ပေမယ့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ရေနည်း ချိန်မှာလုပ်ရတာဖြစ်တယ်၊ တင်ဒါခေါ်ယူမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ရတော့ ဇန်နဝါရီမှ လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ရတာများတယ်၊ လုပ်ငန်းသေးတွေက မတ်လမှာပြီးနိုင် ပေမယ့် လုပ်ငန်းကြီးတွေကတော့ ဧပြီလမှ ပြီးနိုင်မယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီး ရေအရင်းမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတိုးအောင်လင်းက ပြောသည်။
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ငွေလုံးငွေ ရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် လုပ်ငန်း ၁၂ ခု၊ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေဖြင့် လုပ်ငန်းခြောက်ခုနှင့် သဘာဝဘေးရန်ပုံငွေဖြင့် လုပ်ငန်း တစ်ခုတို့ကိုဆောင်ရွက်နေပြီး ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် အချို့သောလုပ်ငန်းများမှာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးကာ အချို့မှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကမ်းပြိုကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်း ကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေလူနေအိမ်၊ စေတီပုထိုး ပျက်စီးမှုမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်လို့ ပြည်သူတွေမှာ အကျိုးရှိပါတယ်၊ ဌာနက ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးတင် မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကြောင်း၊ ရေလမ်းကြောင်း တည် ငြိမ်ဖို့ပါလုပ်ပါတယ်၊ တည်ငြိမ်တော့ ကမ်းပြိုမှုနည်းသွားတယ်၊ ဒီလုပ်ငန်း တွေကို အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တွေနဲ့အတူ ပြည်သူတွေပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်း ၁၉ ခု အနက်ဌာနမှ ကိုးခုနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီများမှ ၁ဝ ခုတို့ကို အမရပူရ၊ မတ္တရာ၊ စဉ့်ကူး၊ ငါန်းဇွန်၊ မြင်းခြံ၊ တံတားဦး၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်များတွင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် ကာကွယ် ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကွန်ကရစ်အခြေ ပြုကျောက်စီခြင်း၊ Steel Basket အခြေပြုကျောက်စီခြင်း၊ ကျောက်ဖြည့် မျောဂရစ်တန်း၊ မျောတိုင်တန်းကျောက် ဖြည့်ရေကာစသည့် နည်းလမ်းများ အသုံး ပြုကြောင်းသိရသည်။ ကမ်းပြိုရသည့် အကြောင်းအရင်း များမှာ လူသားတို့ အပြုအမူကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးရာမှ မြေဆီလွှာများ မြစ်ထဲရောက်ရှိကာ အနည်အနှစ်ကျခြင်း၊ မြစ်၏ရေဝေရေလဲဒေသများတွင် စည်းကမ်းမဲ့ရွှေသတ္တုတူးမှုမှ အနည်များမြစ်ထဲ ကျရောက်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန် မှုကြောင့် ထူးခြားမြစ်ရေတက်ခြင်းတို့က ကမ်းပြိုမှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒလတံတား စီမံကိန်း စတင်ဆောက်လုပ်
ကျပ် ၁ဝဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူအတု ပြုလုပ်သူတစ်ဦးကို ချောင်းသာတွင် ဖမ်းဆီးရမိ၊ နည်းပညာအသုံးချစာအု??